China N'ogbe 3 Vislon akpaka isi suppliers na Manufacturers - GRX mmanya (HONG KONG) CO., LTD.
.Lọ > Mkpọchi uwe isi > Zinc alloy akpaka isi > 3 Vislon akpaka isi
Nke a 3 Vislon akpaka isi na-akpaghị aka isi nke European na American zinc alloy. The ụlọ ọrụ mechaa ISO9001: 2008 quality management usoro asambodo.
1. 1.Ntinye ngwaahịa nke3 Vislon akpaka isi
Nke a 3 roba nha akpaka isi na-mere nke European na American zinc alloy. The ụlọ ọrụ mechaa ISO9001: 2008quality management system asambodo. Ọ nwere ọtụtụ nchọpụta Kemịkalụ na allproducts ndidi SGS ma nwalee tinye ya n'ahịa ahụ mgbe o tozuru oke, webata usoro njikwa ngwaahịa zuru oke, na-aga n'ihu na-emeziwanye ngwaike ngwanrọ na akụrụngwa, ma na-agbasi mbọ ike inweta ahịa ahụ.
2. Ngalaba Ngwaahịa (Nkọwapụta) nke3 Vislon akpaka isi
N'ime oghere size: Ọnụ elu: 2.7MM
Obosara n'onu: 4.8MM
Uwe akwa akwa: 0.95MM
Isi ala: 1.95mm
3. Product features and application of 3 Vislon akpaka isi
A na-ejikarị isi mkpuchi zinc a maka ihu ihu, akpa, agbụ jeans, textiles ụlọ, ihe egwuregwu, akwa ahịa.
4. Product details of 3 Vislon akpaka isi
5. Product Qualification nke3 Vislon akpaka isi
6. Mbukota na njem nke3 Vislon akpaka isi
Tags na-ekpo ọkụ: 3 Vislon akpaka isi, China, N'ogbe, Otutu, Suppliers, Manufacturers